Nepalistudio » अब कसरी बन्छ प्रदेश सरकार ? अब कसरी बन्छ प्रदेश सरकार ? – Nepalistudio
अब कसरी बन्छ प्रदेश सरकार ?
प्रदेश प्रमुखको नियुक्ति र अस्थायी मुकाम तोकिएसँगै प्रदेश सरकार गठनको बाटो खुलेको छ।
अब प्रदेश प्रमुखहरुले राष्ट्रपतिसँग सपथ लिनेछन् भने अस्थायी मुकाममा उनीहरुको कार्यालय स्थापना हुनेछ। प्रदेश प्रमुखको नियुक्ति भएपछि निर्वाचन आयोगले प्रदेश प्रमुखलाई प्रदेशसभा निर्वाचनको अन्तिम परिणाम बुझाउने संवैधानिक प्रावधान रहेको छ।
प्रदेश प्रमुखले निर्वाचनको अन्तिम परिणाम घोषणा भएको बीस दिनभित्र प्रदेश सभाको बैठक बोलाउने व्यवस्था रहेको छ। प्रदेशसभाको पहिलो बैठकमा भाग लिनुभन्दा पहिला प्रदेश सांसदहरुले प्रदेश प्रमुखबाट सपथ लिनेछन्।
संविधानको धारा १६८ अनुसार प्रदेश प्रमुखले प्रदेशसभामा बहुमत प्राप्त दलको संसदीय दलको नेतालाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्न सक्ने प्रावधान रहेको छ। प्रदेश सभामा कुनै पनि पार्टीको बहुमत नरहेमा दुई वा दुई भन्दा बढि दलहरुको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने सदस्यलाई प्रदेश प्रमुखले मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्न सक्नेछन्।
प्रदेश नम्बर १ र ३ मा एमाले एक्लैको बहुमत छ भने प्रदेश नम्बर ६ मा एमालेबिना सरकार बन्न सक्दैन। प्रदेश नम्बर २ बाहेकका प्रदेशमा एमाले–माओवादी गठबन्धनको बहुमत रहेको छ।